Colorblind လူတွေအဘယ်အရာကိုမြင်ကြပါ? - Iris က💡💻 - မျက်လုံးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးများအတွက်အပြာရောင်အလင်း Filter ကို🛌👀
အရောင်ကန်းခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်သာသက်ရောက်သည် 1 တွင် 15 ယောက်ျားနဲ့ 1 တွင် 200 ကမ်ဘာပျေါတှငျအမြိုးသမီးမြား.
There are different reasons for color blindness. And mostly this problem occur genetically and has been inherited from the mother, တချို့လူတွေကထိုကဲ့သို့သောမျိုးစုံနဗ်ကြောအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောအခြားရောဂါများကြောင့်အရောင်မျက်စိကန်းဖြစ်လာသော်လည်း, ဆီးချိုရောဂါ, ကြောင့်စသည်တို့ကွဲပြားခြားနားသောဆေးဝါးများအသုံးပြုခြင်းမှ.
အဆိုပါ colorblind ကလူအများစုဟာအဖြစ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအခြားလူမြင်သည်အတိုင်းတို့ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ကြသည်ဒါပေမဲ့သူတို့အပြည့်အဝ '' အစိမ်းရောင်ကိုမြင်နိုင်စွမ်းမဟုတ်, အပြာသို့မဟုတ်အနီရောင်အလင်း.
အရောင်ကန်း၏အများဆုံးမကြာခဏအမျိုးအစားအနီရောင် / အစိမ်းရောင်အရောင်ကန်းအဖြစ်လူသိများသည်.
ပုံမှန်အားဖြင့်အရောင်ကန်း၏ဤအမျိုးအစားသည်လူကိုဖြစ်ပေါ်. ခက်ခဲတဲ့အနီသို့မဟုတ်အစိမ်းရောင်အရောင်မျက်စိကွယ်သည့်ခံစားနေရသူအနီရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်အရောင်များအထိရောထွေးသည်ဟုမဆိုလိုပေ, တကယ်တော့, ဒါကြောင့်သူတို့ကတပြင်လုံးကိုအရောင်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်အချို့သောအနီရောင်သို့မဟုတ်အစိမ်းရောင်ရှိသမျှသောအရောင်များကိုတက်မွှေဆိုလိုသည်.
Deuteranopia အရောင်ကန်း၏ mildest အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်. အရောင်ကန်း၏ဤအမျိုးအစားအနီရောင်နဲ့ပန်းရောင်၏အများစုအရိပ်ထွက်ကြာနှင့်အစိမ်းရောင်သို့သူတို့ကိုငါလှည့်.
အဆိုပါအစိမ်းရောင်လည်းမှောင်နှင့် duller များမှာ, အညိုရောင်အစိမ်းရောင်ပြောက်ကျားသို့မဟုတ်အလင်းမီးခိုးရောင်အရောင်များမှ rotary.
Protanopia အရောင်ကန်း၏တစ်ဦးထက်ပိုပြင်းထန်ပုံစံဖြစ်ပါသည်. အဲဒီအစားအစိမ်းရောင်အရောင်အနီရောင်အရောင်လှည်၏, ကအနီရောင်ရောင်စုံအချို့ရိပ်တက်ပိတ်, thenappearsr မီးခိုးရောင်သို့မဟုတ်အနက်ရောင်.
အရောင်ကန်းနည်းလမ်းများစွာအတွက်ကသက်ရောက်သည်နှင့်အမျှ, အရာအရောင်များကိုသင့်ရဲ့ website အတွက်သုံးစွဲဖို့ဘေးကင်းကြပြီးမဟုတ်သောအရာထွက်ရှာရန်ခက်ခဲပါကဖွင့်.
ဤတွင်သူတို့ပင်မျက်စိကန်းသည်အသုံးပြုသူများရာဆွဲရန်ဖြစ်နိုင်ခြေအိပ်မက်ဆိုးပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဝေးနေဖို့အနည်းငယ်အရောင်အရောနှောတချို့ရှိနေပါတယ်. ဒါဟာအစိမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်တို့ပါဝင်သည်, အပြာနှင့်အနီမောင်းသော, အလင်းအစိမ်းရောင်နှင့်အဝါရောင်, အနက်ရောင်နှင့်အစိမ်းရောင်, မီးခိုးရောင်နှင့်အပြာ, အစိမ်းရောင်နှင့်အပြာရောင်စသည်တို့ကို.
အဆုံးစွန်သောပုံဥပမာ, မျက်စိနေဆဲစနစ်တကျအရောင်သတင်းအချက်အလက် encodes နှင့်ဦးနှောက်မှတိကျစွာကဖြတ်သန်း, ဒါပေမယ့်ဦးနှောက်မရှိတော့ကြောင်းသတင်းအချက်အလက်နားလညျနိုငျ.
သင် colorblind သို့မဟုတ်မရှိမရှိသောစမ်းသပ်မှုနှင့်အတူအလျင်အမြန်ထွက်ရှာတှေ့နိုငျ.
Vision software https://iristech.co/vision/ သင့်ရဲ့ colorblindness အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်.
အဝါရောင်-အပြာ colorblindness မှာအားလုံးလိင်ရွေးချယ်မဟုတ်ပါဘူး. ဒါဟာမစုံလငျက S-တစ်မျိုးကတော့များ၏ရလဒ်ကိုဖြစ်ပါသည်, ကြောင့်မျိုးရိုးဗီဇမှပုံသဏ္ဌာန်မရှိသောဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရာ, ဒါပေမယ့်လည်းသည်အခြားလှုပ်ရှားမှုများမှတဆင့်တို့ကိုလုယူနိုင်ပါသည်.
အရောင်ကန်း၏အဝါရောင်-အပြာအမျိုးအစား Tritanopia အဖြစ်လူသိများသည်.
စက်မှုဓာတုပစ္စည်းအချို့ကိုအမျိုးမျိုးမှဦးခေါင်းဒဏ်ရာများနှင့်ပွင့်လင်းအဆက်အသွယ်လည်းအပြာ-အဝါရောင်အရောင် visualization ထဲကယူနိုင်ပါတယ်.